I-China enokuphinda isetyenziswe kwakhona i-3 Side Seal Pouches mveliso kunye nabathengisi | NGOKUPHAKAMILEYO
Ukuphinda kusebenze kwakhona iipakethi zetywina ezisecaleni ezi-3. Iipakethi zecala elitywinwe kwicala le-3 zizipaji zohlobo lomqamelo Ngokuvulwa kwelinye icala. Iipakethi zethu zecala lesithathu ezinokuphinda zisebenze zinokubaleka ngesantya esiphezulu kumatshini wokugcwalisa itywina (FFS). Ubukhulu wena njengemfuneko yakho. Iimpawu ezahlukeneyo ziyafumaneka kuwe, ezinje ngefestile ecacileyo yokujonga ngaphakathi imveliso, ukukrazula inotshi ukuze uvule ngokulula, uziphu ukuze uvule kwaye uvale ngokulula, kwaye uxhome umngxunya ukuze uboniswe kakuhle eshelufini, iikona ezijikelezileyo zokuchukumisa ngokugudileyo.
Zingasetyenziselwa ukupakisha ukutya okanye ukutya okungafunekiyo, iziqhamo ezomisiweyo, ukutya okulula kwezilwanyana zasekhaya, iilekese, iibrashi zamazinyo.Dibana neemfuno ezizodwa zemveliso, sinokwenza ngokulula ibhegi yakho yemilo oyikhethileyo enje nge "T-shirt shape". Inokuba yinde kwaye imxinwa ukupakisha iimveliso ezincinci, ezinje ngephepha lovavanyo, okanye inokuba kukuvuleleka ngokubanzi kokutya okufuna ukukhethwa.
Ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze izikhwama ezintathu zetywina zilungile ukupakisha iilekese, ukutya okungumkhenkce, ukutya kwezilwanyana kunye nezinye iimveliso.
Ukuphinda usebenze kwakhona kwiipakethi zetywina ezi-3 ezinokuprintwa okanye ukhetho olungashicilelwanga, zisivumele ukuba senze ngokobungakanani beebhegi ezahlukeneyo.
Ukuphinda usebenze kwakhona kwiipakethi zetywina ezisecaleni ezi-3 ziya kubonelela ngomqobo ophakathi okanye ophakamileyo wobomi beshelfu
3 ibhegi esecaleni etywiniweyo yenziwa kwifilimu eyahlukeneyo, nto leyo ethetha ukuba imiqolo eyahlukeneyo itywinwe kunye ukwenza ipropathi yothintelo oluphezulu ukugcina imixholo intsha.
Inotshi yeinyembezi ihlala ifakiwe kule ngxowa ukuvumela ukuvula ngokulula, ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho, sinokushiya naliphi na icala elinye livulekile, ukuze iimveliso zakho zizaliswe ngesandla okanye zigcwaliswe ngesandla.
Yenza indawo yokuxhoma kwintengiso
Egqithileyo Iindawo ezi-3 zecala elitywiniweyo kunye neepakethe zokucoca / iPlastiki yePlastiki / Ukutya kwePlastiki yeplastiki
Okulandelayo: Iingxowa ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze kwakhona